Shiinaha Battery Warshadaha Iyo Waxyaabaha Kale ee Kiimikada Isticmaal warshad sokor leh oo sariir leh | Qiangdi
Mashiinka pneumatic ee sariirta la sifeeyay ayaa ah qalabka loo isticmaalo in lagu burburiyo qalabka qalalan si loogu daro budada superfine, oo leh qaab dhismeedka aasaasiga ah ee soo socda
Badeecadu waa pulverizer sariir dheecaan leh oo leh hawo cadaadis oo ah dhexdhexaad wax burburinaysa. Jirka milixdu wuxuu u qaybsan yahay 3 qaybood, oo kala ah aagga wax lagu burburiyo, aagga gudbinta iyo aagga qiimeynta. Aagga Darajaynta waxaa la siiyaa shaag shayga, xawaaraha waxaa lagu hagaajin karaa beddelaha. Qolka burbura wuxuu ka kooban yahay mashiinka wax lagu shiido, quudiyaha, iwm. Qalabka giraanta ee sirta bixiya ee ka baxsan haanta burbura waxay kuxirantahay mashiinka burbura.
Maskaxda sambabada waxay ka kooban tahay kombaresarada hawada, saliida soo celiyaha tank taangiga gaaska, qalajiyaha qaboojiyaha, miiraha hawada, sariirta dareeraha wadata ee sariiraha, kala-sooca duufaanka, aruuriyaha, hawo-qaadaha iyo kuwa kale
Dhajinta dhoobada iyo dahaarka PU ee qaybaha wax shiidaya oo dhan oo la xiriiraya alaabada si looga fogaado in birta duugga ah ay u horseedo saameynta aan fiicnayn ee alaabada terminalka
4.Tamar wax ku ool ah: Badbaadinta 30% -40% marka la barbar dhigo kuwa kale ee hawo-mareenka hawo-mareenka.
Gaaska 5.Itarka waxaa loo isticmaali karaa warbaahin ahaan si loogu shiido walxaha ololi kara iyo waxyaabaha qarxa.
6. Nidaamka oo dhan waa la jajabiyay, boodhku wuu hooseeyaa, buuquna wuu hooseeyaa, habka wax soo saarku waa nadiif iyo ilaalinta deegaanka.
7. Nidaamku wuxuu qaataa xakamaynta shaashadda taabashada caqliga, hawlgalka fudud iyo xakamaynta saxda ah.
8. Qaab dhismeedka is haysta: qolka mashiinka weyn wuxuu iskuxiraa wareegga xiritaanka ee burburka.
Shaxda qulqulka ee Qalabka Jet-ka ee Dareeraha ah
Isticmaalka hawada (m3/ daqiiqo)
Dhexroor ka mid ah waxyaabaha la quudiyay (mesh)
Fineness of burburin (d97)m)
Awood (kg / h)
Awood rakibay (kw)
Ballaca qurubyada la quudiyay
Ballaca qurubyada la sii daayay
Soo saar（kg / h）
Hore: Shaybaar-isticmaal Jet Mill Fluidized-sariirta Wixii Awood 1-10kg ah
Xiga: Nidaamka Gawaarida Gawaarida ee Jet-ka ee Qalabka Gaarka ah